यस्तो बन्दैछ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको मोडालिटी ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more यस्तो बन्दैछ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको मोडालिटी !
यस्तो बन्दैछ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको मोडालिटी !
भदौ २३ गते, २०७७ - १६:१०
एक साता निषेधाज्ञा थपेर रोजगारीका क्षेत्रलाई खुला गर्ने, जोर–विजोर प्रणाली लागू गर्ने गरेर सवारी साधन पनि चल्न दिने लगायतका माेडालिटीमा छलफल भइरहेको छ । त्यस्तै, उद्योग, कलकारखाना र पसलहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर खुला गर्न दिने ।
काठमाडौं । उपत्यकामा निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाइने भएको छ ।
अझै संक्रमण नियन्त्रणमा नआएकाले उपत्यका पूर्ण रुपमा खुला गर्न नहुने तर हालकै अवस्थामा निरन्तरता दिँदा जनस्तरबाट विरोध हुनसक्ने भन्दै निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउने तयारीमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् ।
गृह मन्त्रालयले पनि निषेधाज्ञालाई थप खुकुलो बनाउने गरी खाका प्रस्तुत गर्न उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसबारेमा आज छलफल हुने र भोलि मात्रै निर्णय गरिने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले जानकारी दिए ।
एक साता निषेधाज्ञा थपेर रोजगारीका क्षेत्रलाई खुला गर्ने, जोर–विजोर प्रणाली लागू गर्ने गरेर सवारी साधन पनि चल्न दिने लगायतका माेडालिटीमा छलफल भइरहेको छ । त्यस्तै, उद्योग, कलकारखाना र पसलहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर खुला गर्न दिनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा तेस्रो पटक थपिएको निषेधाज्ञाको समय बुधबार मध्यराति सकिँदैछ । सरकारमाथि निधेषाज्ञा खुुकुलो गर्न दवाव बढ्दै छ ।
लगातारको लकडाउन र निषेधाज्ञाले आम जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । सरकारले एकातिर कोरोना रोकथाममा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र अर्कोतिर निषेधाज्ञाले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको टिप्पणी बढ्दै गएको छ ।
भदौ २३ गते, २०७७ - १६:१० मा प्रकाशित